Sokajy: Vola, vola ary asa
Mividy sa manofa? Trano sy vola
Tsy misy fisalasalana velively fa tsara tarehy kokoa fotsiny ny miaina amin'ny rindrinao efatra. Farafaharatsiny rehefa tafatsangana ny fianakaviana ary mifarana ao amin'ny kaonty matetika ny karama dia maro no mieritreritra ny hividy trano. Mazava ho azy, tsy nofinofisinao ny hanana irery ny tranonao ary izany angamba no olana.
Ny rindrinao efatra - mendrika hividy trano ve ianao?
Mipetraka ny fanontaniana raha mety ho tsara kokoa ny manofa trano. Hoy izahay - miankina izany!
Manofa na mividy, izany no fanontaniana - © Dan Race / Adobe Stock
Iza koa no hahazo famatsiam-bola?
Rehefa mitady sombin-tany mety na fananana azo vidiana dia milatsaka ny mason'ny olona sasany. Ary marina izany, satria mafy ny vidiny. Iza no hahazo vola ara-bola toy izany mihitsy?
Fanontaniana tsara, ireo fianakaviana manana fidiram-bola antonony dia zara raha manana fotoana ahafahana mamatsy vola ny tranony any Munich, ohatra. Ny sandan'ny fampindramam-bola tsy mitsaha-mitombo dia mampitombo ny tsindry vola amin'ny mpampindrana ary mitombo ny risika. Mazava ho azy fa mihabe ny vola ampaham-bola indramina isam-bolana raha te handoa vola alohan'ny hahafatesanao ianao. Etsy ankilany, ny risika dia mitombo isaky ny mandeha ny indram-bola arak'izany, afaka miakatra indray ny zanabola.
Ka raha kely na tsy manana fananana ara-bola ianao dia tsy maintsy manaiky fe-potoana lava indramina sy taha ambony. Raha tsy mifandanja izany dia holavin'ny banky ny fampindramam-bola. “Mividy sa manofa? Fonenana sy vola " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 15. May 2021 5. September 2021 Sokajy Vola, vola ary asa, Trano sy tranoKeywords an-trano, Condominium, Hauser, mividy, manofa, trano, velona hofainaLeave a Comment hividy sa hanofa? Fonenana sy vola
Androany, raha ny tahan'ny zanabola dia ambany indrindra amin'ny tantara hatramin'ny nisian'ny krizy ara-bola sy ara-bola nanomboka ny taona 2007 ka hatramin'ny 2009, dia manontany tena ny ray aman-dreny hoe inona ny fampiasam-bola tokony hofidiny. Elaela ny andro nahazoanao efatra na dimy isanjaton'ny kaonty fitehirizana ary nitombo be ny tahiry. Misy dikany ihany ny fanokafana kaonty zaza, na noho io toe-javatra io.
Kaonty ho an'ny ankizy
Rehefa dinihina tokoa, tsy mbola eo aloha loatra ny mianatra mifehy vola.
Efa manana kaonty ho an'ny ankizy? - Saripikan'i Bruno / Alemana avy ao amin'ny pixel
Mora noresahina ilay millionaire amerikana Jean Paul Getty, izay tompon'ny sambo mpitondra solika lehibe indrindra eran-tany tamin'izany. Ilay fitenenana voatonona betsaka hoe "tsy miresaka vola ianao dia manana an'io" dia avy aminy.
Na izany aza, ity tetikady ity dia mety hanimba ny ankizy. Raha resaka raharaham-bola dia aleo ny ray aman-dreny mifikitra amin'ny teny filamatra hoe "Izay tsy ianaran'i Hans, tsy mianatra intsony intsony i Hans".
Miaraka amin'ny kaonty zaza, mianatra miatrika vola ny zanaka nefa tsy misy risika be. Na ny zazakely aza dia milalao an'io lohahevitra io amin'ny fomba filalaovana rehefa milalao ao amin'ny fivarotana enta-madinika. "Mila manana kaonty ho an'ny ankizy ve ianao?" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 14. May 2021 5. September 2021 Sokajy Fampianarana, akaninjaza & sekoly, Vola, vola ary asaKeywords -bola, vola, Kaonty zaza, Def, kaonty, Kaonty ho an'ny ankizyLeave a Comment zu Kaonty ho an'ny ankizy, ilaina ve izany?
Vatsian'ny ankohonana | Trano sy vola
Omena ny vola. Amin'ny maha-fepetra takiana amin'ny famenoana ireo filantsika fototra dia tsy maintsy misy izany. Na hofan-trano na fivarotana, fiara na entam-barotra, tsy vitanao ny tsy manam-bola. Fa ampy ve ny volan'ny ankohonana?
Vola ao an-trano: eo anelanelan'ny banky sy ny fanjifana
Ny fahafaha-miatrika ny volanao manokana farafaharatsiny dia tokony ho voajanahary toy ny miankina amin'ny loharanom-bola. Mampalahelo fa matetika dia tsy izany no izy.
Vola ao an-trano - Sary avy amin'i Steve Buissinne avy ao amin'ny Pixabay
Betsaka no mahalala ny fahatsapana fa nanjavona tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ny vola miditra ary tampoka dia mazava fa kely ny zavatra hainao hatramin'ny faran'ny volana.
Voamarina imbetsaka isan'andro ny fifandanjana kaonty ary antenaina ny famindrana tahiry. Fa avy aiza ireo fahasahiranana ireo amin'ny loharanon-karena azo alaina?
Ny volan'ny ankohonana
Ny teny hoe vola ao an-trano dia takatra fa ny loharanon-karena ara-bola ahazoan'ny olona na fianakaviana fivelomana. Ny vola miditra amin'ny karama sy ny tombontsoa hafa rehetra, toy ny tombotsoan'ny ankizy, dia ampidirina amin'ny fandaniana ary tsy maintsy ampiharina. Ireo izay mahay manisa tsara sy manara-maso ny zavatra mazàna dia mahazo izay azony atao. Na izany aza, ireo izay mandany mihoatra noho izay dia mety hanana olana na ho ela na ho haingana.
Ankoatry ny fivelomana dia matetika no olana ny fampiasana ny vola an-trano amin'ny fomba tsara indrindra. Matetika loatra dia maro no mihevitra fa nanjavona tsotra izao ilay vola nefa tsy nividy na inona na inona. "Volan'ny ankohonana | Fonenana sy vola " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 18. March 2021 5. September 2021 Sokajy Vola, vola ary asa, tokantranoKeywords fidiram-bola, -bola, vola, tokantrano, Volan'ny ankohonana, Boky volaLeave a Comment amin'ny volan'ny ankohonana | Fonenana sy vola
Vola am-paosy - | Vola fanabeazana
Tsy andrin'ny ankizy foana ny andro ahazoany ny volany any am-paosiny ihany. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny zaza ny vola. Ny fomba tsara indrindra hianarana ny fampiasana azy ireo araka ny tokony ho izy rehefa manana vola iray eo am-pelatanany izy ireo.
Izany no ianaran'ny ankizy ny fomba fitantanana tsara ny vola am-paosy
Ohatrinona ny vola am-paosy mety? - © Dan Race / Adobe Stock
Amin'izany fomba izany no ahafantaran'izy ireo ny dikan'ny hoe mizara vola efa misy, manao zavatra tsy misy zavatra, manatanteraka ny faniriana kely ary mitahiry amin'ny fotoana maharitra mba hanaovana fividianana lehibe kokoa.
Raha mandany ny vola kasaina mandritra ny herinandro ao anatin'ny iray andro ianao, ohatra amin'ny vatomamy, magazine na zavatra hafa, matetika dia tsy misy vola am-paosy intsony avy amin'ny ray aman-dreninao.
Ho azy ireo, ny olan'ny vola am-paosy dia midika hoe mijanona tsy miova ary tsy miditra amin'ny resaka rehetra.
Ny lahatsoratra manaraka dia manolotra fanampiana kely momba ny vola tokony homen'ny ray aman-dreny ny zanany.
Ny habetsaky ny vola am-paosy dia miankina amin'ny fahafaha-manao vola amin'ny ray aman-dreny sy ny taonan'ny ankizy.
Ohatrinona ny vola tokony ho azon'ny ankizy amin'ny taona firy?
Mba hahafahan'ny ankizy mianatra hatramin'ny mbola kely ny fomba fitantanana vola, dia tokony hanomboka manome vola am-paosy ny ray aman-dreny amin'ny taona farany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Satria ny zaza mianatra manao raharaham-bola amin'ny fomba milalao ankehitriny dia tsy hanana olana amin'izany intsony. "Vola am-paosy - | Volan'ny fampianarana " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 18. Aogositra 2020 5. September 2021 Sokajy Fampianarana, akaninjaza & sekoly, Vola, vola ary asaKeywords -bola, vola, tanora, ankizy, vola am-paosy, Mianara miatrika volaLeave a Comment am-paosy vola - | Fitaizana vola
Mitsitsia vola amin'ny fanjaitra
Ny fanjaitra dia miverina amin'ny lamaody ary mahomby kokoa noho ny saika fialam-boly hafa. Zavatra tsara sy mahasoa ary tsy manam-paharoa maro, toy ny haingon-trano sy akanjo, azo anaovana ary tsy misy olon-kafa manana akanjo mitovy vita aminy.
Mampitony anao ny fanjaitra ary manangona vola anao
Na izany aza, ny asa-tanana dia misy fiatraikany mampiadana amin'ny olona maro ary maneho toy izany ny fanonerana fotoana fialam-boly mahafinaritra amin'ny fiainana andavan'andro.
Fanjaitra - © Dan Race / Adobe Stock
Ity fialamboly ity dia takatra fa ny hetsika rehetra ampiasana lamba, kofehy na volon'ondry amin'ny tanana. Mba hahafahana manapa-kevitra momba ny asa-tanana mety indrindra sy mety amin'ny maha olom-baovao azy, dia tokony hodinihintsika aloha izay valiny farany (unchouilles, akanjo sns.) Hanintona anao indrindra ary lamba iza no takiana amin'izany.
Saingy tokony hodinihina ihany koa ny teknolojia takiana amin'ny tranga tsirairay, izay andrana tsara indrindra miaraka amin'ny torolàlana tsotra ao amin'ny YouTube na amin'ny boky.
Manjaitra, manjaitra na manaingo?
Ny zaitra dia mety ho an'izay tsy mahatsapa lamaody ivelan'ny talantalana. Na dia iharan'ny sary tsy mitombina lava aza io karazana asa-tanana io dia niverina amin'ny lamaody indray izy ankehitriny. Ny lamba na fitaovana hafa dia atambatra amin'ny tanana na milina fanjairana. Ny fisafidianana lamba sy lamina maroloko dia lehibe tokoa, izay ahafahana manamboatra akanjo, ondana sofa na biby mihombo aza. "Mitsitsia vola amin'ny asa-tanana" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 22. Jolay 2020 5. September 2021 Sokajy Vola, vola ary asa, tokantranoKeywords DIY, Ataovy izany, Crochet, handwork, tenona samy hafa soratra, manjaitra, knittingLeave a Comment Mitahiry vola amin'ny fanjaitra